Anigu Xaafadayda Xan-danbe Ka Dhagaysan Maayo.!! | Baligubadlemedia.com
Anigu Xaafadayda Xan-danbe Ka Dhagaysan Maayo.!!
“Wax diido markay jirta wax doonkuna meel mar yahay”. Geedka .
Waxa yaab ah oo cajiiba adigoo wax diidan inaad hadana badheedhi waydo oo dibnubu ku gar-gariiran. Waxaan daawaday hadalkii Wasiirkii hore ee Macdanta Xukuumaddii Axmed Siilaanyo, Eng: Xuseen Cabdi Ducaalle. Anigoo og in laga reebay ergadi Shirkii Kulmiye oo waliba isagoo kamid aha Xubnihii Axmed Siilaanyo ergadiisa aha uu Madaxweyne Muuse Biixi diiday isaga iyo ragg kale oo Ex Wasiir Shucayb Gabilay & Maxamed Dhabeeye uu dhammaantod Muuse Biixi shirka u diiday, anigoo og inuu Mucaarid aan meel ku biirin yahay oo cirkaas maraayo, anigoo og waxa cadho haysa ayuu hadana leeyahay “Maan doonan Golaha dhexe ee Kulmiye shirkana kama qayb galin” . Bikuli Ixtiraam waxay doodu tahay “Ex Wasiir waa lagu diiday oo meesha Cabdikariin Xinif ayaa ka doobi naayay ee hadalka adkee oo waxa uurka kaga jira si aan gargariir lahayn u dheh”.
Anigu xanshaashaq danbe iyo xan kama dhagaysanaayo Xaafadayda. Dhammaantod Muuse Biixi way higaadinayaan misana badheedh ma jiro oo farba lagu wada gabanaya . Waar danbiga iska daaya Xantu waa danbiye bahasha banaanka keena H-Love badheedhe ayaa lagu yaqaanay.. Ninka Maxamuud Xaashi Cabdi isagu koone ayuu u baxay warkiisana waa cadeeyay lakiin balo waxay ka dhacday inta qoriga kabriidka wax ka yar ku gabanaysa.
Kuwii Xukumadda ku jiray ayaa ku odhanaaya ” Waxba ma jiraan waxba ma qaban karno Diyaarad ma soo dayn karno” . Dee hadda iskaga tag meesha masaarif miyaad u joogta ,? Waa maxay waxan oo baal qoyani ahi.
“Nin kuyidhi sinaan mayno, adna buri sarayntiisa sadka waad wadaagtane ma sagaashan-ba tiisu”. Markale Abwaan Geedka amma Hadraawi.
Warku wuxuu ku dhanyahay anigu xan-danbe idinla wadaagi maaye waa inooyo markaad goolada ka soo wada baxdaan..
Muniir A. Cigal